Ny tetikasa Ara dia hanana kinova Android L | Androidsis
Ny tetik'asa Ara dia hanana kinova Android L izay novaina izay mamela ny fanovana modules tsy hamerenana amin'ny laoniny
El Tetikasa Ara mbola mijoro miaraka amina telefaona maodely ahafahantsika manova modules araka ny faniriantsika na dia amin'ny telefaona aza mandeha.
Izahay dia efa afaka nahafantatra tamin'ny androny ny habe amin'ny modules, ny karazana processeur hampiasainy na ny vidiny. Ny fampahalalana izay tonga androany dia misy ifandraisany amin'ny ampahan'ny rindrambaiko sy ny fomba mety hahatongavany manova modules tsy mila averina amin'ny laoniny.
1 Lozisialy inona no hanohana ny tetikasa Ara?
2 Linaro any Ara
3 Tetikasa kely Ara
Lozisialy inona no hanohana ny tetikasa Ara?
Ny hevitra ao ambadiky Ara dia ny ahafahanao manampy ny modules tianao amin'ny fitaovana arakaraka ny filan'ny mpampiasa. Avy amin'ny fahaizana manana tahiry be dia be na dia manana fitaovana misy fakan-tsary avo lenta aza, na manana bateria mahazaka avo lenta mihitsy aza.
Paul Eremenko dia nanolotra antsipiriany vitsivitsy amin'ny horonantsary iray momba ny fomba fiasan'ny Ara. Azavao ny fomba fiasan'ny Ara amin'ny alàlan'ny kinova Android L novaina ahafahana manome fitaovana maoderina.
Hamela ny mpampiasa hanova modules aza rehefa mandeha ny terminal, eny, ireo ihany no tsy afaka esorina amin'ity toe-javatra ity ny CPU ary ny efijery, zavatra mirindra. Misy ihany koa ny fetra hafa noho ny iray hafa amin'ity lafiny ity, satria ny memo RAM dia tsy nety nesorina indray mandeha satria singa iray tena ilaina amin'ny fampandehanana rafitra iray, toy ny fahatsiarovana lehibe.
Linaro any Ara
Google dia miasa miaraka amin'i Linaro (orinasam-pampianarana misokatra loharano) hamolavolana ity kinova Android ity. Ny modules an'ny tetik'asa Ara dia amidy amina fivarotana an-tserasera mitovy amin'ny Play Store, ahafahanao mamorona telefaona tadiavinao.
Ny kinova miasa an'ny Ara dia tokony ho naseho tamin'ny fihaonambe faharoa an'ny developer tamin'ny volana Desambra tamin'ny famoahana farany tamin'ny voalohan'ny 2015.
Tetikasa kely Ara
Ny vidiny voalohany ahafahanao mividy terminal Ara dia 50 dolara izay tsy maintsy ampidirinao ireo modely samihafa hanamboarana azy araka izay itiavanao azy. Na dia mety miovaova aza ny haben'ny telefaona, na inona na inona fanovana tiantsika hatao. Azo atao amin'ny Nexus 5 ny habeny ka mety ho Note 4 ianao.
Ny firafitry ny telefaona Ara nantsoina hoe «Endo». Avy amin'ity fototra ity, ny modules samihafa dia hitambatra amin'ny andriamby. Raha vantany vao voalamina tsara ny terminal dia azo "voadona" amin'ny pulsa fanilo elektrika izy io mba hamoronana rohy mivaingana eo anelanelan'ny faritra antsoina hoe Endo sy ireo modules.
Ny iray amin'ireo toetra tsara ananan'i Ara dia izany dia hamela customization ny ao ambadiky ny telefaona hanampiana ny fifandraisantsika manokana amin'ny endrika manokana isan-karazany toy ny karandoha na izay tonga ao an-tsaina. Ity dia iray amin'ireo marika mampiavaka ny tetik'asa Ara.
Ankoatr'izay dia izy ihany koa tolo-kevitra mahaliana ho an'ny mpamorona izay te-hamorona modely tokana amin'ny alàlan'ny fanokafana tsena ho azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny tetik'asa Ara dia hanana kinova Android L izay novaina izay mamela ny fanovana modules tsy hamerenana amin'ny laoniny
Waze dia nanampy tamin'ny andiany 3.9 an'i Waze Places, fanampiana amin'ny fijanonana ary maro hafa
Ahoana ny fomba hamehezana Xperia Z3 sy Xperia Z3 Compact